Isibane Setafile I-Oplamp ibandakanya umzimba we ceramic kunye nesiseko esomeleleyo somthi apho kubekwa khona ukukhanya kokukhanya. Ngombulelo kubume bayo, obufunyenwe ngokudityaniswa kweekhowuni ezintathu, umzimba we-Oplamp unokujikeleziswa kwizikhundla ezintathu ezahlukileyo ezenza iintlobo ezahlukeneyo zokukhanya: isibane setafile ephezulu ngokukhanya okukufutshane, isibane setafile esisezantsi esinokukhanya okukufutshane, okanye izibane ezimbini ezibekekileyo. Ulungelelwaniso ngalunye lweekhonkco zesibane luvumela ubuncinci beelitye zokukhanya ukuba zinxibelelane ngokwendalo kunye nolungelelwaniso loyilo olujikelezileyo. I-Oplamp yenzelwe kwaye yenziwe ngesandla e-Itali.
Isibane Setafile Esinokuhlengahlengiswa
Isibane Setafile Esinokuhlengahlengiswa Inkangeleko ye-poobatic yePoise, isibane setafile eyilelwe nguRobert Dabi we-Unform.Studio itshintshela phakathi kokuma kunye nokuguquguquka kunye nokuma okukhulu okanye okuncinci. Kuxhomekeke kubungakanani phakathi kweringi yayo ekhanyisiweyo kunye nengalo eyibambayo, umgca wokudibana okanye ojijekileyo oya kwisangqa uyenzeka. Xa ibekwe eshelufini ephezulu, iringi ingangaphezulu kwishalofu; okanye ngokufaka iringi, inokuchukumisa udonga olujikelezileyo. Iinjongo zolu hlengahlengiso kukufumana umniniyo ukuba abandakanyeke ngobuchule kwaye adlale ngombane wokukhanya ngokulinganayo kwezinye izinto ezijikelezileyo.
Isithethi Seokhestra Iokhestra yeqela lezithethi ezidlala kunye njengeemvumi zokwenyani. I-Sestetto yinkqubo yesandi yemijelo emininzi yokudlala ithrekhi yezixhobo ezizodwa kwizandisi-lizwi ezahlukeneyo zobuchwephesha kunye nezinto ezinikezelwe kwityala elithile lesandi, phakathi kwekhonkrithi emsulwa, ukubuyisela kwakhona iibhodi zezandi zomthi kunye neempondo zeceramic. Ukudityaniswa kweetraki kunye nezahlulo kubuya kube ngokwasemzimbeni kwindawo yokumamela, njengekhonsathi yokwenyani. I-Sestetto yiokhestra yegumbi lomculo orekhodiweyo. I-Sestetto iveliswe ngqo ngabaqulunqi bayo uStefano Ivan Scarascia noFrancesco Shyam Zonca.
Isitulo Esidlangalaleni Segadi Yangaphandle
Isitulo Esidlangalaleni Segadi Yangaphandle IPara siseti yezitulo zangaphandle zikawonke-wonke eziyilelwe ukubonelela ngokuthintela ukuthintelwa kuseto lwangaphandle. Iseti yezitulo ezinendlela eyodwa ehambelanayo kwaye zinxaxha ngokupheleleyo kulungelelwaniso olubonakalayo oluyinxalenye lwesitulo esiqhelekileyo Esikhuthazwe yimilo elula yesawoni, le seti yezitulo zangaphandle inenkalipho, yeyangoku kwaye iyakwamkela ukusebenzisana. Zombini ezinomgangatho onzima onobunzima, iPara A ixhasa ukujikeleza okungama-360 kwisiseko sayo, kunye nePara B ixhasa ukujija ngamacala amabini.
Isibane Setafile Isibane Setafile Esinokuhlengahlengiswa Isithethi Seokhestra Isitulo Esidlangalaleni Segadi Yangaphandle Itafile Uthotho Lwefanitshala